Gaga ny mpihaino vaovao teto an-toerana satria misy tsy fahamatorana izany avy ao amin’ny vondrona tsy miankina amin’ny fikarakarana fifidianana. Manarak’izay, ny mpanao gazety malagasy dia nanaja ny tsy famoahana ny vokatra na dia efa nananan’ireo ihany ary ny ambavongangony. Tsy midika ho fitsabahan’ny Frantsay indray ve ity tsy fanajàna ny lamina napetraka ity ?
NODYAN-TANINDRAZANA IREO MPANAO TRAFIKA
Vao tsy mipetraka amin’ny toerany akory Rajoelina dia efa tafaverina eto an-tanindrazana avokoa ireo olobe amin’ny fanondranana hazo sarobidy. Izy ireo anefa dia efa namoahana didy fampisamborana sy fikarohana eraky ny nosy. Ny hany herin’ireo mpandroba harem-pirenena dia ny nitsoaka an’i Madagasikara. Saingy izao dia efa eto daholo indray ireo ary fantatra ny nampiditra azy teto an-tanindrazana.
VOAROBA NY FIANGONANA
Nanjavona avokoa ny fitaovana fitendrena mozika ary koa ny fanamafisam-peo teo anivon’ny Fjkm Ambodin’Isotry. Nandritry ny hain-trano goavana izay niseho teny an-toerana ka nahamay ny trano maherin’ny dimampolo. Nandritra izany no nanararaotan’ireo olon-dratsy namoahana ny fitaovana tao amin’ilay Fiangonana. Tsy kely lalana ny ratsy ary tsy mifidy ny toerana izay hatao lasibatra intsony noho ny halatra izay toa lasa kolontsaina ankehitriny.
Raikitra koa ny tifitifitra amin’ny andro antoandro tao Fenoarivo Atsinanana. Mpivady izay hamonjy fodiana no nisy nitifitra. Ilay ramatoa no voan’ny bala ka naratra mafy. Ilay raim-pianakaviana kosa niharan’ny daroka isan-karazany ary tsy nahatsiaro tena intsony. Samy miady amin’ny fahafatesana izy roa ankehitriny noho ny nafitsok’ireo olon-dratsy izay tsy tena mbola voafaritra mazava ny tena tanjony.
FANAFIHAN-JIOLAHY ENY ALASORA
Mitohy hatrany ny fandrahonan’ny jiolahy ny mponin’Alasora. Mametaka afisy mihitsy izy ireo ary mampitandrina ny vahoaka mba hiala ao an-toerana satria hanafika miaraka amin’ny fitaovam-piadiana ireo olon-dratsy. Nisy fotoana dia nisy tranga toy izany teny Ambohimangakely ary rehefa nandeha ny fanadihadiana dia olona somary marary saina no tompon’antoka ka nosamborina tao am-piangonana. Asa anefa raha toy izay koa ity eny Alasora ity.
Ny lozam-pifamoivoizana no trangam-piarahamonina betsaka nisy indrindra nandritry ny fetin’ny noely teo. Nahatratra enina izany saingy mba tsy niteraka fahafatesan’olona. Olona niady an-dalambe koa no betsaka nosamborin’ny polisy, ankoatr’ireo mpanendaka. Polisy an’arivony no nahetsika teto an-drenivohitra ary betsaka tamin’izy ireo no nampanaovina fanamiana sivily ka mba nampilamindamina ny tanàna.